Yenza imixholo yeselfowuni ngeWPtouch Pro | Martech Zone
Yenza imixholo yeselfowuni ngeWPtouch Pro
NgoMvulo, Agasti 1, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 UJenn Lisak Golding
Kwilizwe elihamba ngokukhawuleza, kubalulekile ukuba indawo yakho yenziwe ngcono kuzo zonke izixhobo eziphathwayo, kubandakanya iifowuni kunye neetafile. Ngokwangoku kutsha nje kwi-infographic ziveliswe Ithegi kaMicrosoftUkusetyenziswa kweintanethi okusetyenziswayo kuya kuthatha ukusetyenziswa kwedesktop ngonyaka ka-2014. Akufuneki ukuba, indawo yakho yeselfowuni yenye yezinto zakho eziphambili zokuthengisa kwihlabathi lanamhlanje.
WPtouch Pro yiplagi yeWordPress ekuvumela ukuba wenze ngokulula kwaye wenze umxholo onobutyebi wesayithi yakho. Iplagi ibonelela ngesakhelo apho unokwenza umxholo owenziwe ngokwezifiso ohlukileyo kwisiza esenzelwe idesktop. Inesakhono sokusebenza nezinye iiplagi kwaye isebenzise uninzi lweempawu zeWordPress.
I-WPtouch Pro ixhasa imixholo yee-iPhones, ii-iPads, i-Android, i-Palm OS, iBlackberry, kunye ne-Samsung, eneempawu ezinjengeemenyu ezipheleleyo, ukuthengisa kunye neenkcukacha manani. Sele sive ukutsiba kutyelelo lwethu lweselfowuni ukusukela oko sasebenzisa iWPtouch Pro-ngubani ongayifuniyo loo nto?
tags: IiVidiyo zeNtengiso
Ukuthandwa kweeLwimi zeeNkqubo